ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ အဟော - Padaethar
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ အဟော
လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ)
ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့ မပြောနိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။
ယောက်ျားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော….
( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။
( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင်ခံစားရတတ်သည်။
( ၄ ) နှာခေါင်းတည့်တည့် (နှာသီးထိပ်ဖျား)တွင် မှဲ့ရှိလျှင် စာပေ၊ ဇာတ်သဘင်၊ တေးဂီတ အနုပညာရပ်များဖြင့် ထင်ရှား၍ အောင်မြင်ကျော်ကြား တတ်ပါသည်။
( ၅ ) ညာဘက်မျက်ခမ်းအောက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်သည်။ မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်၍ အသံကြား သနားစေ- ဟူသောဆုတောင်းဖြင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ လူအများ၏ချစ်ခင်ခြင်း ခံရတတ်သည်။
( ၆ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းအောက်နားတွင် မှဲ့ရှိလျှင် လူမုန်းများတတ်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အတိုက်အခံနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ ငယ်စဉ်အခါက ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် စွန့်စားတတ်သည်။ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သည်။ ဇနီးမယားကို ချစ်ခင်သူဖြစ်မည်။ ဇနီးသည်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခံရတတ်ပါသည်။
( ၇ ) ညာဘက်ပါးမို့တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် မိန်းကလေးများ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါသည်။ လောကကို တရားသဘောဖြင့် ရှုမြင်တတ်သောသူ ဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးရင့်လာလျှင် ရသေ ရဟန်း ပြုတတ်သည်။ အများအကျိုးဆောင်သည့် သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၈ ) ဘယ်ဘက်ပါးပေါ်တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် မိန်းမချောများ (သို့မဟတု) ထင်ရှားကျော်ကြားသော မိန်းမနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ မိန်းမတို့၏ ချစ်ခင်စွဲခြင်းကို အထူးသဖြင့် ခံယူရတတ်ပါသည်။
( ၁၁ ) မေးစေ့တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာ တတ်ပါသည်။ သတင်းကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားအောင်မြင်မည်။
( ၁၂ ) မေးစေ့နားတဝိုက်တွင် ထင်ရှားသောမှဲ့ရှိလျှင် ဒုက္ခဆင်းရဲ အမျိုးမျိုးတို့ကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်တတ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများတွင်လည်း ပါရှိသည်။
( ၁၃ ) မျက်ရည်စီးကျရာ လမ်းကြောင့်တည့်တည့် (ဝဲ,ယာ)တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မယားဆုံးတတ်သည်။ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ရေး ညံ့တတ်သည်။ စီးပွားရှာရာတွင် ပင်ပန်းတတ်ပါသည်။
( ၁၄ ) လည်ပင်းတွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ချမ်းသာကြီးပွားတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အကြံအစည် အောင်မြင်တတ်သည်။ ဆင်းရဲလျှင်လည်း တခဏတာဖြစ်၍ မမျှော်လင့် မထင်မှတ်သော အကြောင်းတခုခုဖြင့် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။
( ၁၅ ) ဘယ်, ညာ လက်မောင်း (သို့မဟုတ်) လက်ဖျံ ဘယ်,ညာတွင် မှဲ့ရှိလျှင် ဆင်းရဲသူဖြစ်ပါက လူလတ်တန်းစားဘဝဖြင့် အဆင်ပြေတတ်သည်။ အလယ်အလတ်တန်း အဆင့်ဖြစ်လျှင် ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူဌေး ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၁၆ ) ရင်ဘတ် ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်တွင် မှဲ့တလုံးစီ ရှိ၍ ရင်ဘတ်အလယ်တည့်တည့်တွင် မှဲ့တလုံး၊ ခါးနားတွင် မှဲ့တလုံး၊ ပါရှိခြင်းကို မှဲ့စလွယ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အသက်ရှည်၍ ဗဟုသုတ ဉာဏ်အမြော်အမြင် ကြီးမားသော ရှေးလူကြီးများ၊ ရသေ့ပညာရှိကြီးများ၏ အဆိုအမိန့်အရ ယောက်ျားတွင် မှဲ့စလွယ်ရှိခြင်းသည်
ယခင်ဘဝဟောင်းက မင်းဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟု အဆိုအမိန့်ရှိကြ၏။ မှဲ့စလွယ် ပါရှိသောသူသည် ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် မကြုံရဘဲ အဆင့်အတန်းမြင့်သည့် ဘဝမျိုးနှင့် နေနိုိင်ရလိမ့်မည်။ လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ခံ၇တတ်သည်။ ဇနီးမယားအပေါ်တွင် သြဇာညောင်း တတ်ပါသည်။
( ၁၈ ) တင်ပါး၏ ဘယ်ဘက် (သို့မဟတု) ညာဘက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် အရှက်အကြောက် အလွန်ကြီးတတ်ပါသည်။ စိတ်သဘောထား နုတတ်သည်။ ယောက်ျားဖြစ်ပါလျက်နှင့် တခါတရံတွင် မိန်းမဆန်သော အပြုအမူအနေအထိုင်များကို တွေ့ရတတ်သည်။
( ၂၀ ) ခြေဖဝါးအလည်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် တနေရာတည်းတွင် အတည်တကျနှေုမရဘဲ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝဖြင့် သွားလာနေထိုင်ရကာ ဘဝဆုံးပါးပျက်စီးတတ်ပါသည်။
( ၂၁ ) ဘယ် (သို့မဟုတ်) ညာ ခြေဖမိုးတွင် မှဲ့ များစွာ ပါရှိလျှင် သူရဲကောင်းဖြစ်တတ်သည်။ (သို့မဟုတ်) လူဆိုး၊ ဓားပြ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ တုတ်၊ ဓား၊ လှံ စသည့် လက်နက်ကိရိယာများကို ဆောင်ထားတတ်သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးပညာများတွင်လည်း ဝါသနာပါ၍ ပညာရှင်ဖြစ်တတ်သည်။
( ၂၂ ) ရင်ညွန့်တည့်တည့်တွင် ထင်ရှားသော မှဲ့ရှိလျှင် သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်း ဖြစ်တတ်သည်။ တရားဓမ္မ နှလုံးသွင်းတတ်သည်။ လောကီ သမထဈာန်တန်ခိုးဘက်သို့ လိုက်စားတတ်သည်။ သိဒ္ဓိ မဟိဒ္ဓိ တန်ခိုးများရ၍ ပေါက်မြောက်နိုင်သည်။
( ၂၃ ) ညာဘက်လက်တွင် မှဲ့ပါရှိလျှင် ငွေကြေးကို အကြောင်းပြု၍ အမှုဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကပ်စေးနှဲသူ၊ မိမိကိုယ်ကျိုး တခုတည်းကိုသာ ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၂၄ ) လက်ဖဝါးပြင်၏ ဘယ် ညာ နှစ်ဖက်စလုံး၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် ထူးထူးခြားခြား မှဲ့အစိမ်းတလုံး ပါရှိလျှင် လူအများ၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်း ခံရသော ဘုန်းရှင်၊ ကံရှင်၊ ပါရမီရှင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာဓိုရ်၊ သိဒ္ဓိရှင်၊ မဟိဒ္ဓိရှင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူဖြစ်သည်။ ဝိဇ္ဇာလမ်းသို့ လိုက်စားလျှင် ဆရာသမားကောင်းနှင့် တွေ့ပြီး သိဒ္ဓိရတတ်ပါသည်။
( ၁ )နဖူးပြင်၏ မျက်ခုံးအထက်နားတွင် မှဲ့မည်းတလုံးတည်းရှိလျှင် ဂုဏ်ဓနနှင့်ကျော်စောသော လင်ယောက်ျားကို ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဆက် များတတ်သည်။ သားယောက်ျားများ ထွန်းကားသည့်မိခင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
( ၂ ) ညာဘက်နားထင် မျက်ခုံး၏ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငယ်ရွယ်စဉ်က ဆင်းရဲ၍ ကြီးသော ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ အိုဇာတာ ကံကောင်းမည်။ မိမိသြဇာကို နာခံမည့် လင်ယောက်ျားအား ရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် မှန်သမျှကို ဦးစီးဦးဆောင် ပြုလုပ်တတ်သည်။ သားယောက်ျားမွေးပြီး အကျိုးပေးတတ်သည်။
( ၃ ) အထက်နှုတ်ခမ်း (သို့) အောက်နှုတ်ခမ်း အနီးတဝိုက်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် မိမိကို ချစ်မြတ်နိုးသော ယောက်ျားများ ပေါများတတ်သည်။ ယောက်ျားများ၏ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရမည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အချစ်နှင့်ပတ်သက်လျှင် အစွဲအလမ်းစိတ် ကြီးတတ်သည်။ အစားအသောက်ကောင်းများကို အထူးကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။
( ၄ ) ဘယ်ဘက်ပါးပြင်မို့တွင် မှဲ့ရှိလျှင် စိတ်နု၍ အညှာလွယ်တတ်ပါသည်။ တဖက်သားပြောလာသည့်စကားကိုမစဉ်းစားဘဲ အယုံလွယ်တတ်ပါသည်။ ယောက်ျားများ၏ စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ အရေးပေခြင်းကို ခံရတတ်သည်။
( ၅.) ညာဘက်ပါးပြင်မို့တွင် စံပယ်တင်မှဲ့ရှိလျှင် လူချစ်လူခင်များတတ်သည်။ စန်းအလွန်ပွင့်တတ်သည်။ လင်ယောကျာ်းအပေါ် သစ္စာရှိတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေ၍ အောင်မြင်ကျော်ကြားမည်။ ကံကောင်းသူ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
( ၇ ) ဘယ် ညာ လက်မောင်း (သို့) ဘယ်လက်ဖျံ ညာလက်ဖျံတွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်း မပြုရဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနှင့် နေထိုင်ရတတ်ပါသည်။
( ၉.) ရင်၏အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံတတ်ပါသည်။ မိမိအပေါ် အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်မည့် လင်ယောက်ျားကို ရတတ်သည်။ သားကောင်း သမီးကောင်း ထွန်းကားတတ်သည်။
( ၁၁ ) မှဲ့စလွယ် ပါရှိလျှင် ငယ်စဉ်က ဆင်းရဲစေကာမူ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတတ်သည်။ ကတော်မယား ဖြစ်တတ်ပါသည်။ လူသိများပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားသော လင်ယောကျာ်းကို ရတတ်ပါသည်။ မည်မျှဆိုးသွမ်းသော ယောကျာ်ား ဖြစ်စေကာမူ မိမိ၏သြဇာကို နာခံမည့်လင်ယောကျာ်းနှင့် ပေါင်းဖက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူတိုငျးမှာ မှဲ့ရှိတတျတာမို့ ကြား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောငျ တငျပေးတာပါ)
ဗဟုသုတအနနေဲ့မြှဝတောပါ။ အမှနျကွီးပဲလို့မပွောနိုငျသလို၊ အမှားတှပေါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယျ့မှာ ပါတာလေးတှနေဲ့ တိုကျကွညျပေါ့။ ကွိုကျလြှငျယူ၊ မကွိုကျလြှငျ ပယျလိုကျပါ။
( ၃ ) ဘယျဘကျမကျြခုံးမှေးပျေါတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ အရကျသမား၊ ကွကျသမား၊ လောငျးကစားသမား ဖွဈတတျသညျ။ လောငျးကစားမှုကို ဇနီးမယားထကျပငျ ပိုမို၍ ခဈြခငျြစှဲလမျးနှဈသကျပါသညျ။
( ၄ ) နှာခေါငျးတညျ့တညျ့ (နှာသီးထိပျဖြား)တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ စာပေ၊ ဇာတျသဘငျ၊ တေးဂီတ အနုပညာရပျမြားဖွငျ့ ထငျရှား၍ အောငျမွငျကြျောကွား တတျပါသညျ။
( ၇ ) ညာဘကျပါးမို့တှငျ စံပယျတငျမှဲ့ရှိလြှငျ မိနျးကလေးမြား စိတျဝငျစားခွငျးကို ခံရတတျသညျ။ မကျြနှာပှငျ့လနျးတတျပါသညျ။ လောကကို တရားသဘောဖွငျ့ ရှုမွငျတတျသောသူ ဖွဈသညျ။ အသကျကွီးရငျ့လာလြှငျ ရသေ ရဟနျး ပွုတတျသညျ။ အမြားအကြိုးဆောငျသညျ့ သာသနာပွုပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈတတျပါသညျ။
( ၁၁ ) မေးစတေ့ညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးဖွငျ့ ကွီးပှားခမျြးသာ တတျပါသညျ။ သတငျးကောငျးဖွငျ့ ကြျောကွားအောငျမွငျမညျ။
( ၁၄ ) လညျပငျးတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ခမျြးသာကွီးပှားတတျသညျ။ အလုပျအကိုငျ အကွံအစညျ အောငျမွငျတတျသညျ။ ဆငျးရဲလြှငျလညျး တခဏတာဖွဈ၍ မမြှျောလငျ့ မထငျမှတျသော အကွောငျးတခုခုဖွငျ့ ခမျြးသာတတျပါသညျ။
( ၁၆ ) ရငျဘတျ ဘယျဘကျနှငျ့ ညာဘကျတှငျ မှဲ့တလုံးစီ ရှိ၍ ရငျဘတျအလယျတညျ့တညျ့တှငျ မှဲ့တလုံး၊ ခါးနားတှငျ မှဲ့တလုံး၊ ပါရှိခွငျးကို မှဲ့စလှယျဟု ချေါဆိုသညျ။ အသကျရှညျ၍ ဗဟုသုတ ဉာဏျအမွျောအမွငျ ကွီးမားသော ရှေးလူကွီးမြား၊ ရသပေ့ညာရှိကွီးမြား၏ အဆိုအမိနျ့အရ ယောကျြားတှငျ မှဲ့စလှယျရှိခွငျးသညျ
ယခငျဘဝဟောငျးက မငျးဖွဈခဲ့သူဖွဈသညျဟု အဆိုအမိနျ့ရှိကွ၏။ မှဲ့စလှယျ ပါရှိသောသူသညျ ဆငျးရဲဒုက်ခနှငျ့ မကွုံရဘဲ အဆငျ့အတနျးမွငျ့သညျ့ဘဝမြိုးနှငျ့ နနေိုငျရလိမျ့မညျ။ လူအမြား၏ ကွညျညိုလေးစားခွငျးကို ခံ၇တတျသညျ။ ဇနီးမယားအပျေါတှငျ သွဇာညောငျး တတျပါသညျ။
( ၁၇ ) ဘယျဘကျ (သို့မဟုတျ) ညာဘကျ ပေါငျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ လငျြမွနျဖတျြလတျသူ ဖွဈတတျသညျ။ လူမှုရေးကိစ်စ အဝဝကို သိနားလညျပွီး အကငျးပါးသူ ဖွဈတတျသညျ။
( ၂၁ ) ဘယျ (သို့မဟုတျ) ညာ ခွဖေမိုးတှငျ မှဲ့မြားစှာ ပါရှိလြှငျ သူရဲကောငျးဖွဈတတျသညျ။ (သို့မဟုတျ) လူဆိုး၊ ဓားပွ ဖွဈတတျပါသညျ။ တုတျ၊ ဓား၊ လှံ စသညျ့ လကျနကျကိရိယာမြားကို ဆောငျထားတတျသညျ။ တိုကျခိုကျရေးပညာမြားတှငျလညျး ဝါသနာပါ၍ ပညာရှငျဖွဈတတျသညျ။
( ၂၂ ) ရငျညှနျ့တညျ့တညျ့တှငျ ထငျရှားသော မှဲ့ရှိလြှငျ သူတျောကောငျး သူမွတျလောငျး ဖွဈတတျသညျ။ တရားဓမ်မ နှလုံးသှငျးတတျသညျ။ လောကီ သမထဈာနျတနျခိုးဘကျသို့ လိုကျစားတတျသညျ။ သိဒ်ဓိ မဟိဒ်ဓိ တနျခိုးမြားရ၍ ပေါကျမွောကျနိုငျသညျ။
( ၃ ) အထကျနှုတျခမျး (သို့) အောကျနှုတျခမျး အနီးတဝိုကျတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ မိမိကို ခဈြမွတျနိုးသော ယောကျြားမြား ပေါမြားတတျသညျ။ ယောကျြားမြား၏ နှဈနှဈကာကာ ခဈြမွတျနိုးခွငျးကို ခံရမညျ။ မိမိကိုယျတိုငျလညျး အခဈြနှငျ့ပတျသကျလြှငျ အစှဲအလမျးစိတျ ကွီးတတျသညျ။ အစားအသောကျကောငျးမြားကို အထူးကွိုကျနှဈသကျသူဖွဈသညျ။
( ၇ ) ဘယျ ညာ လကျမောငျး (သို့) ဘယျလကျဖြံ ညာလကျဖြံတှငျ မှဲ့ရှိလြှငျ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျကိုငျစားသောကျခွငျး မပွုရဘဲ အေးအေးခမျြးခမျြးနှငျ့ နထေိုငျရတတျပါသညျ။
Categories ဗေဒင်လက္ခဏာ Post navigation
အညာမှာ အရမ်းပေါတဲ့ ဒီအပင်က ဒီလောက်အထိ စွမ်းသတဲ့လား….
အရေခွံ ဘယ်လောက်လဲလဲ မြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူး (မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်)